Ngomso iVenkile entsha yeApple eChicago ivula | Ndisuka mac
Nangona unyaka wonke sihlala sithetha ngeevenkile ezintsha ezivulwa yiApple kwihlabathi liphela, kunokwenzeka ukuba awuyi kuzikhumbula zonke. Kodwa ngeli xesha kunokwenzeka ukuba kwimemori yakho inkumbulo engacacanga yeVenkile entsha yeApple eChicago, Ivenkile yeApple leyo Ngexesha lokwakha yadlala i-logo ye-Apple eluphahleni ifanisa ukuvela kweMacBook. Le venkile intsha, eza kuzinyaswa ngu-Angela Ahrendts, ivula ngomso kwaye iye yaba yenye yeevenkile ze-Apple kwihlabathi liphela, ngenxa yoyilo lwayo oluhle kunye neembono zayo, ezinikezela kubo bonke abatyelelayo, ukusuka eMichigan River.
Ivenkile entsha yeApple, ebekwe kwiMichigan Avenue kwaye inomphezulu, kuphela indawo yoluntu, phantse i-2.000 yeemitha zesikwereYeyona venkile ineendleko eziphezulu kwi-Apple, i-62 yezigidi zeedola. Intloko yevenkile ebonakalayo kunye ne-intanethi, u-Angela Ahrendts sele edolophini ukuza kuzokuvula le venkile intsha kwaye avale yonke imiphetho esenokuba isalindile namhlanje.
UAngela wabelane ngefoto kwiakhawunti yakhe ye-Twitter apho ivela nenxalenye yabasebenzi eyinxalenye yabasebenzi kwindawo yokufikelela ukusuka kwindawo ephambili enika ukufikelela kwivenkile. Kwi-tweet, u-Angela uyawuxabisa umsebenzi oza kwenziwa liqela elisefotweni kunye nabasebenzi xa sele zivuliwe iiVenkile ezintsha ze-Apple ngomso.
Ukubhiyozela ukusungulwa, iApple ayizukuvula iingcango ngaphandle kokunye, ukuba yenye yeeflegi entsha yenkampani kwaye iya kubonelela ngezinto ezimangazayo kubo bonke abazimase. U-Apple wafikelela kwisivumelwano kunye umculi wehip-hop uSaba wenza ingoma entsha ebizwa ngokuba "Apho Iingcinga Zicula" njengendlela yokuqaqambisa ubuchule kunye namandla esi sixeko. Ukuzisa amazwi ale ngoma ebomini, uApple ubeneMateyu Hoffman, oza kuzisa iingoma ebomini ngokupeyinta umfanekiso omkhulu osecaleni kwivenkile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ngomso iVenkile entsha yeApple eChicago iyavula